काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण ‘मित्रताका आडमा आफ्नो विस्तारवादी नीति पुरा गर्ने उद्देश्यबाट’ भएको बताएको छ । यति बेला मोदी नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेका छन् । तर नेकपा (मसाल) ले मोदी नेपाल आउनु अगाडि नै उनको भ्रमण पछाडि लुकेको स्वार्थ प्रष्ट पारेको थियो । मोदीलाई अभिनन्दन गर्न जनकपुरमा निकै तामझामपूर्ण तरिकाले चलाइएको तयारीलाई नेकपा (मसाल) ले “नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्धको कुरा” बताएको थियो ।
मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा २०७५ वैशाख २७ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले यस सम्बन्धमा भन्नु भएको थियो– “२ नं. प्रदेशमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिनन्दनका लागि भव्य (?!) तयारी वास्तवमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानका विरुद्धको नै कुरा हो । २ नंं. प्रदेशको निर्माण भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार नै गरिएको थियो । वास्तवमा भारतले तराईका सबै जिल्लालाई पहाडी भूभागबाट अलग गरेर बेग्लै प्रदेशहरु बनाउन खोजेको थियो । अन्ततः त्यो योजना सफल हुन सकेन । तर २ नं. प्रदेशको निर्माण त्यसरी नै गरिएको थियो । हाम्रो पार्टीले संविधान निर्माणको क्रममा पनि २ नंं. प्रदेशको निर्माणको विरोध गरेको थियो र त्यस प्रकारको प्रावधानका विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । अब व्यवहारबाट नै त्यो २ नं. प्रदेशको निर्माण नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा नभएको कुरा प्रष्ट छ ।
भारतले तराईका बाँकी जिल्लाहरुलाई पनि पहाडी भूभागबाट अलग गरेर बेग्लै प्रदेशहरुको निर्माण गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि नै मधेशवादीहरुले संविधानमा संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । अहिले मोदीको जसरी अस्वाभाविक तरिकाले स्वागतको तयारी भइरहेको छ, त्यसले तराईमा बेग्लै प्रदेशहरु बनाउनुको उद्देश्य भारतीय विस्तारवादी रणनीतिलाई पुरा गराउनु थियो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
मोदीको सुरक्षाका लागि नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय सैनिकहरुको जसरी प्रयोग गरिएको छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ । मुक्तिनाथ जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि मोदीको सुरक्षाका नाममा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय सैनिकहरुलाई पठाउने काम भइरहेको छ ।
मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलामा अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम निश्चित गरिएको छ । यो नेपालको जलसम्पादमाथि भारतीय विस्तारवादले बढाउँदै लगिरहेको अतिक्रमणको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले हाम्रो पार्टीले त्यो शिलान्यासलाई पनि राष्ट्रघाती कार्य ठान्दछ र विरोध गर्दछ ।
यो आम नेपाली जनतालाई थाहा भएको कुरा हो कि मोदी सरकारले संविधानको निर्माणको क्रमदेखि नै नेपालप्रति जुन प्रकारको नीति अपनाउँदै आएको छ, त्यो अवस्थामा त्यसलाई नेपालको मित्रशक्ति भन्न सकिन्न । अहिले पनि मित्रताका आडमा नेपालप्रतिको आफ्नो विस्तारवादी नीति पुरा गर्न नै मोदीको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा मोदीको भ्रमणबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर खतरा पुग्ने जुन सम्भावना छ त्यसप्रति नेकपा (मसाल) ले सम्पूर्ण देशभक्त जनताको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छ ।”